Kedu ihe kpatara Typepad ji mee ngwa mgbakwunye Anti-Spam WordPress? | Martech Zone
M gbara ọsọ ọhụrụ Typepad Anti-spam ngwa mgbakwunye ihe karịrị otu izu na ma Typepad na Akismet amata kpọmkwem otu ihe dị ka spam. M hichapụ Typepad - ọ dịghị mkpa ka ha abụọ.
Ihe a juru m anya. Gịnị mere Typepad ji dee ngwa mgbakwunye ha? Ọ bụrụ na akụkụ nke mgbakwunye ziri ezi bụ n'ihi mmadụ ole etinyela ya, ọ bụ ka Typepad nwee ike inye ndị ọrụ ha nchebe ka mma site na ịgbasa mkpuchi ha?
Akismet ebubo maka azụmahịa nke ngwa mgbakwunye ha. Ndi Typepad nyere nke a iji belata ego Akismet?
Ndị chọrọ ịmata ihe chọrọ ịmata!
Tags: ojii Fraịde statsmmekọrịta mgbasa oziVidio Ahịamobile ahịankwalite ahịa ahịa ekwentịMySQL dochie
Akwụkwọ akụkọ na-aga n'ihu igbu onwe ha n'ụzọ na-enweghị isi
Jun 11, 2008 na 9:51 AM
Hmmm ezigbo mma Doug!
Dị ka ngwa ngwa, enwere m ihe 2000 + na - eche nkwụsịtụ - you maara aghụghọ m nwere ike ịme ọtụtụ ha na-enweghị ịgagharị na ibe site na ibe!?!
Jun 11, 2008 na 10:21 AM
My naanị ndụmọdụ bụ na-agba ọsọ ọhụrụ version nke WordPress. Ma ọ dịkarịa ala, ọ bụ 'Ajaxian' na ọdịdị na-enye ohere na peeji nke imelite na ada ka ị akara ihe. N'ikwu eziokwu, ọ bụrụ na ọ gara na Spam, anaghị m enyocha ya - Akismet na-arụ ọrụ nke ọma!
Azịza dị mfe, Doug, anyị mere ya n'ihi na anyị chọrọ inyere ndị mmadụ aka igbochi spam. 🙂 Anyị chere na anyị nwere ihe na - abụghị naanị n'efu ma na - emeghe karịa, mana ọ na - eme nke ọma karịa. Mfe!
Daalụ maka ime ka anyị mara - Akwụsaghị m na-eche maka arụmọrụ na mpụga nke ọtụtụ spam okwu ị na-ejide!
Have nwere ọnụọgụgụ ọ bụla iji kwado arụmọrụ ka mma?
Daalụ Doug, ejighị m n'aka etu o si gbagoo nke ukwuu, ọ bụ naanị na anaghị m achọ iji aka eme ya!
Echiche kacha mma si England,
Maka spam bụ nnukwu nsogbu.Ma n'ihi ndị spammers oge ọ bụla mgbe m chọrọ ikwu okwu m na-eche echiche ugboro abụọ. Dị ka onye na-ede blọgụ ya na-eme m obi amamikpe mgbe ụfọdụ.